Imigomo Yesevisi -
Le migomo nemibandela elandelayo ilawula konke ukusetshenziswa kwewebhusayithi ye-opskar.com nakho konke okuqukethwe, izinsizakalo nemikhiqizo etholakala kuwebhusayithi noma etholakala kuyo (ihlanganiswe, iWebhusayithi). Iwebhusayithi iphethwe futhi iqhutshwa ama-ops (“ops”). Iwebhusayithi inikezwa kuncike ekwamukelweni kwakho ngaphandle kokuguqulwa kwayo yonke imigomo nemibandela equkethwe lapha nayo yonke eminye imithetho yokusebenza, izinqubomgomo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, Inqubomgomo Yobumfihlo ye-OPS) nezinqubo ezingashicilelwa ngezikhathi ezithile kuleli Siza ngu I-OPS (ngokuhlanganyela, "Isivumelwano").
Sicela ufunde lesi Sivumelwano ngokucophelela ngaphambi kokufinyelela noma ukusebenzisa iWebhu. Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yewebhusayithi, uyavuma ukuthi uboshiwe ngemigomo nemibandela yalesi sivumelwano. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, khona-ke ngeke ukwazi ukufinyelela kuWebhu noma usebenzise noma yimaphi amasevisi. Uma le migomo nemibandela ibhekwa njengokunikezwa yi-OPS, ukwamukelwa kuphelelwe yile migomo. Lewebhusayithi iyatholakala kuphela kubantu ngabanye okungenani abaneminyaka engu-13 ubudala.
I-akhawunti yakho ye-opskar.com ne-Site. Uma udala ibhulogi / isayithi kwiwebhusayithi, unesibopho sokugcina ukuphepha kwe-akhawunti yakho kanye nebhulogi, futhi unesibopho ngokugcwele kuyo yonke imisebenzi eyenzeka ngaphansi kwe-akhawunti nanoma yiziphi ezinye izenzo ezithathwe ngokuphathelene nebhulogi. Akumelwe uhlathulule noma unikeze amagama angukhiye kubhulogi yakho ngendlela edukisayo noma engekho emthethweni, kufaka phakathi ngendlela ehlose ukudayisa igama noma idumela labanye, futhi i-OPS ingashintsha noma isuse noma iyiphi incazelo noma igama elingukhiye elibheka njengokungafanele noma elingekho emthethweni, noma mhlawumbe kungabangela ukuba i-OPS iphoqe. Kufanele usheshe wazise i-OPS nganoma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwebhulogi yakho, i-akhawunti yakho noma ezinye iziphulwa zokuphepha. I-OPS ngeke ikwazi ukubhekana nanoma yiziphi izenzo noma ukukhishwa kwakho, kufaka phakathi noma yikuphi ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yezenzo noma ukushiya.
Umsebenzi wabanikeli. Uma usebenzisa ibhulogi, phawula ngebhulogi, uthumela izinto kwiWebhusayithi, uthumela izixhumanisi kwiWebhusayithi, noma uma kungenjalo wenze (noma uvumele noma yimuphi umuntu wesithathu ukuba enze) izinto zitholakale ngeWebhusayithi (noma yikuphi okunjalo, "Okuqukethwe" ), Ubophezeleke ngokuphelele kokuqukethwe, nanoma yikuphi ukulimala okuvela kulokho okuqukethwe. Lokho kunjalo kungakhathaliseki ukuthi okuqukethwe okukhulunywa ngakho kungumbhalo, ihluzo, ifayela lokulalelwayo, noma isoftware yekhompyutha. Ngokwenza okuqukethwe kutholakale, umele futhi uqinisekisa ukuthi:
Ukulandwa, ukukopisha nokusetshenziswa kokuqukethwe ngeke kuphule amalungelo okubambisana, kufaka phakathi kodwa kungagcini ku-copyright, ilungelo lobunikazi, uphawu lokuhweba noma amalungelo okuhweba okuhweba, kwanoma yiluphi umuntu wesithathu;
ibhulogi yakho ayiqanjwanga ngendlela edukisa abafundi bakho ukuthi bacabange ukuthi ungomunye umuntu noma inkampani. Isibonelo, i-URL yebhulogi yakho noma igama akulona igama lomuntu ngaphandle kwakho noma inkampani okungeyona eyakho; futhi uma, kokuqukethwe okubandakanya ikhodi yekhompyutha, uhlukaniswe kahle futhi / noma wachaza uhlobo, uhlobo, ukusetshenziswa nemiphumela yezinto, noma ngabe uceliwe ukwenza kanjalo nge-OPS noma ngenye indlela.
Ngokuthumela okuqukethwe ku-OPS ukuze kufakwe kuwebhusayithi yakho, unikeza i-OPS emhlabeni wonke, i-royalty free, kanye nelayisensi engeyona eyedwa yokukhiqiza, ukuguqula, ukuvumelanisa nokushicilela okuqukethwe kuphela ngenhloso yokubonisa, ukusakaza nokukhuthaza ibhulogi yakho . Uma ususa okuqukethwe, i-OPS izosebenzisa imizamo enhle yokuyisusa kwiwebhusayithi, kodwa uyavuma ukuthi ukugcinwa kwe-caching noma izinkomba kokuqukethwe akunakwenziwa ngokushesha akutholakali.
Ngaphandle kokukhawulela noma yiziphi zalezo zimelo noma amawaranti, i-OPS inelungelo (yize kungesona isibopho), ngokubona kwe-OPS (i) ukwenqaba noma ukususa noma yikuphi okuqukethwe, ngombono ofanele we-OPS, okwephula noma iyiphi inqubomgomo ye-OPS noma okuyingozi nganoma iyiphi indlela noma ophikisayo, noma (ii) anqamule noma anqabe ukufinyelela nokusetshenziswa kweWebhu kunoma yimuphi umuntu noma inhlangano nganoma yisiphi isizathu, ngokubona kwe-OPS kuphela. I-OPS ngeke ibe nesibopho sokunikeza imbuyiselo yanoma yimaphi amanani akhokhelwa phambilini.3
Ngokukhetha umkhiqizo noma insizakalo, uyavuma ukukhokha i-OPS imali ekhokhelwa isikhathi esisodwa kanye / noma nyanga zonke noma ukubhaliswa kwonyaka (okunye okungekho kwemali yokukhokha kungafakwa kwezinye izingxoxo). Izinkokhelo zokubhaliselwa zizokhokhiswa ngesisekelo sokukhokhwa kwangaphambi ngosuku ozobhalisela ukuze uthuthukise futhi uzokhipha ukusetshenziswa kwalowo nkonzo esikhathini sokubhalisa nyangazonke noma ngonyaka njengoba kubonisiwe. Izinkokhelo azibuyiswa.
Ngaphandle kokuba uzise i-OPS ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokubhalisa okufanele ukhansele ukubhalisa, ukubhalisa kwakho kuzovuselela ngokuzenzakalelayo futhi usigunyaze ukuthi siqoqe imali ekhokhwayo yonyaka noma yenyanga yokubhalisa (kanye nanoma yiziphi izintela) usebenzisa noma yiliphi ikhadi lesikweletu noma enye inqubo yokukhokha esinayo ekurekhodini yakho. Ukuthuthukiswa kungakhanselwa noma nini ngokuthumela isicelo sakho ku-OPS ngokubhala.
Imali; Inkokhelo. Ngokubhalisela i-akhawunti Yezinsizakalo uyavuma ukukhokha i-OPS imali esebenzayo yokusetha nezimali eziphindaphindayo. Imali ekhokhwayo izofakwa kuma-invoyisi kusukela ngosuku insizakalo yakho esungulwa ngalo nangaphambi kokusebenzisa leyo misebenzi. I-OPS inelungelo lokushintsha imigomo nemali ekhokhwayo ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) ngaphambi kokukubhalela. Izinsizakalo zingakhanselwa nguwe noma kunini ngezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zesaziso esibhaliwe ku-OPS Support. Uma insizakalo yakho ifaka phakathi ukufinyelela kosekelo lwe-imeyili olubalulekile. “Ukwesekwa nge-imeyili” kusho amandla okwenza izicelo zosizo lobuchwepheshe nge-imeyili nganoma yisiphi isikhathi (ngemizamo enengqondo eyenziwe yi-OPS yokuphendula kungakapheli usuku olulodwa lwebhizinisi) maqondana nokusetshenziswa kwe-VIP Services. "Okubaluleke kakhulu" kusho ukuthi ukusekelwa kubaluleke kakhulu kunokusekelwa kwabasebenzisi bezinsizakalo ezijwayelekile noma zamahhala ze-opskar.com. Konke ukwesekwa kuzohlinzekwa ngokuya ngemikhuba ejwayelekile yezinsizakalo, izinqubo kanye nezinqubomgomo.
Isibopho sabavakashi bewebhusayithi. I-OPS ayikabuyekezi, futhi ayikwazi ukubukeza, konke okubhaliwe, kufaka phakathi isoftware yekhompyutha, okuthunyelwe kwiWebhusayithi, ngakho-ke akunakubophezeleka kokuqukethwe kwalolo lwazi, ukusetshenziswa noma imiphumela. Ngokusebenzisa iWebhusayithi, i-OPS ayimeleli noma isho ukuthi ivumela okuqukethwe okuthunyelwe lapho, noma ukuthi ikholwa ukuthi leyo nto inembile, iyasebenziseka noma ayiyona ingozi. Unesibopho sokuthatha izinyathelo zokuqapha lapho kudingeka ukuze uzivikele wena nezinhlelo zekhompyutha yakho kumagciwane, izikelemu, amahhashi eTrojan, nokunye okuqukethwe okulimazayo noma okulimazayo. Iwebhusayithi ingaqukatha okuqukethwe okucasulayo, okuyihlazo, noma okunye okungathandeki, kanye nokuqukethwe okuqukethe ukungalungi kwezobuchwepheshe, amaphutha we-typographical, namanye amaphutha. Iwebhusayithi futhi ingaqukatha okokusebenza okwephula ubumfihlo noma amalungelo okukhangisa, noma okwephula impahla yomqondo namanye amalungelo wobunikazi, wezinkampani zangaphandle, noma ukulanda, ukukopisha noma ukusetshenziswa kwayo kuncike emigomeni nemibandela eyengeziwe, eshiwo noma engashiwongo. I-OPS iyazikhipha kunoma imuphi umthwalo ngenxa yokulimala okuvela ekusetshenzisweni kwezivakashi zeWebhusayithi, noma kunoma yikuphi ukulandwa yibo abavakashi bokuqukethwe okuthunyelwe lapho.
Okuqukethwe Kuthunyelwe Kwezinye Amawebhusayithi. Asibuyekezanga, futhi asikwazi ukubuyekezwa, zonke izinto, kufaka phakathi isofthiwe yekhompyutha, ezitholakalayo ngokusebenzisa amawebhusayithi kanye namakhasi ewebhu lapho izixhumanisi ze-opskar.com, futhi ezixhumanisa ne-opskar.com. i-yourcompany ayinakho ukulawula kulawo mawebhusayithi angewona we-yourcompany namakhasi wewebhu, futhi akuyona into enomthwalo wokuqukethwe kwabo noma ukusetshenziswa kwabo. Ngokuxhumanisa newebhusayithi yakho engekho ye-yourcompany noma ikhasi lewebhu, i-OPS ayifuni noma isho ukuthi ivumela iwebhusayithi noma ikhasi lewebhu. Unomthwalo wokuthatha izinyathelo zokuqapha njengoba kudingekile ukuze uzivikele wena nezinhlelo zakho zekhompyutha kusuka kumagciwane, izimpethu, amahhashi weTrojan, nokunye okuqukethwe okulimazayo noma okulimazayo. I-OPS inqabeli noma yikuphi umthwalo wemfanelo nganoma yikuphi ukulimala okubangelwa ukusetshenziswa kwakho kwamawebhusayithi angewona ama-ops namakhasi ewebhu.
Ukuphulwa kwe-copyright nenqubomgomo ye-DMCA. Njengoba i-yourcompany icela abanye ukuthi bahloniphe amalungelo ayo empahla yengqondo, iyawahlonipha amalungelo empahla yengqondo yabanye. Uma ukholwa ukuthi okokusebenza okutholakala noma okuxhunywe ku-opskar.com kwephula i-copyright yakho, uyakhuthazwa ukuthi wazise i-OPS ngokuya ngenqubomgomo ye-OPS's Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). I-OPS izophendula kuzo zonke izaziso ezinjalo, kufaka phakathi njengoba kudingeka noma kufanelekile ngokususa okwephula umthetho noma ukukhubaza konke ukuxhumana kulokho okwephulayo. I-OPS izonqamula ukufinyelela nokusetshenziswa kweWebhusayithi nokusetshenziswa kweWebhusayithi uma, ngaphansi kwezimo ezifanele, isivakashi sinqume ukuba ngumthetho ophindaphindiwe wamalungelo obunikazi noma amanye amalungelo empahla yengqondo ye-OPS noma abanye. Esimweni sokunqanyulwa okunjalo, i-OPS ngeke ibe nesibopho sokunikeza imbuyiselo yanoma yimaphi amanani akhokhelwa i-OPS phambilini.
Okwenziwe ngenqondo. Lesi Sivumelwano asidlulisi sisuka enkampanini yakho siye kuwe noma iyiphi i-OPS noma impahla yomuntu wesithathu, futhi konke okulungile, isihloko nentshisekelo kuleyo mpahla kuzohlala (njengaphakathi kwamaqembu) ne-OPS kuphela. I-OPS, opskar.com, ilogo ye-opskar.com, nazo zonke ezinye izimpawu zokuhweba, amamaki wensiza, ihluzo namalogo asetshenziswa maqondana ne-opskar.com, noma iWebhusayithi yizimpawu zokuhweba noma yizimpawu zokuhweba ezibhalisiwe ze-OPS noma ezinikeza amalayisense ze-OPS. Ezinye izimpawu zokuthengisa, amamaki wensiza, ihluzo namalogo asetshenziswe maqondana neWebhusayithi kungenzeka kube yizimpawu zokuhweba zabanye abantu besithathu. Ukusetshenziswa kwakho kweWebhusayithi akukuniki lungelo noma ilayisense lokuphinda uzalise noma usebenzise enye i-OPS noma izimpawu zokuhweba ezivela eceleni.
Izikhangiso. U-OPS unelungelo lokubonisa izikhangiso kubhulogi yakho ngaphandle kokuthi uthenge i-akhawunti engenazikhangiso.
Isichasiso. I-OPS inelungelo lokukhombisa izixhumanisi zesichasiso njenge-'Blog ku-opskar.com, 'umbhali wetimu, nokunikezwa kwefonti ku-footer yakho yebhulogi noma kubha yamathuluzi.
Imikhiqizo kazakwethu. Ngokwenza kusebenze umkhiqizo wozakwethu (isb. Ingqikithi) kusuka komunye wozakwethu, uyavumelana nemigomo yesevisi yalowo uzakwethu. Ungakhetha ukuphuma emigomeni yesevisi yabo nganoma yisiphi isikhathi ngokuvula umkhiqizo womlingani wakho.
Amagama Esizinda. Uma ubhalisa igama lesizinda, usebenzisa noma udlulisa igama lesizinda ebhalisiwe ngaphambilini, uyavuma futhi uyavuma ukuthi ukusetshenziswa kwegama lesizinda nakho kungaphansi kwezinqubomgomo ze-Internet Corporation Yamagama Nezinombolo Ezabelwe (“ICANN”), kufaka phakathi Amalungelo Okubhalisa Nemithwalo Yemfanelo.
Izinguquko. I-OPS inelungelo, ngokuqonda kwalo kuphela, ukuguqula noma ukushintsha noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano. Kungumthwalo wakho ukuhlola lesi Sivumelwano ngezikhathi ezithile ukuze ushintshe. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo noma ukufinyelela kwiwebhusayithi emva kokuthunyelwa kwanoma yikuphi ukushintshwa kwalesi Sivumelwano kubandakanya ukwamukelwa kwalezo zinguquko. I-OPS ingase inikeze ngamasevisi amasha kanye / noma izici ngokusebenzisa iWebhu (ngokufaka, ukukhululwa kwamathuluzi amasha nezinsiza) esikhathini esizayo. Izici ezintsha ezinjalo kanye / noma amasevisi kuzokuba ngaphansi kwemigomo nemibandela yalesi Sivumelwano.
Ukuqedwa. I-OPS ingaqeda ukufinyelela kwakho kuyo yonke ingxenye noma ingxenye yeWebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi, noma ngaphandle kwesizathu, noma ngaphandle kwesaziso, kusebenza ngokushesha. Uma ufisa ukuqeda lesi Sivumelwano noma i-akhawunti yakho ye-opskar.com (uma unayo), ungavele uyeke ukusebenzisa Iwebhusayithi. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, uma une-akhawunti yezinsizakalo ezikhokhelwayo, leyo akhawunti inganqanyulwa kuphela yi-OPS uma wephula lesi Sivumelwano ngokweqile futhi wehluleka ukulungisa lokho kwephula ezinsukwini ezingamashumi amathathu (30) kusukela ekwazisweni kwe-OPS kuwe; inqobo nje uma i-OPS ingaqeda iwebhusayithi ngokushesha njengengxenye yokuvalwa okujwayelekile kwensizakalo yethu. Zonke izinhlinzeko zalesi Sivumelwano okufanele ngokwemvelo yazo zisinde ekunqanyulweni zizosinda ekunqanyulweni, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukuhlinzekwa kobunikazi, ukuzikhulula kwewaranti, isibopho kanye nemikhawulo yesikweletu.
Ukuziphendulela kwamawaranti. Iwebhusayithi inikezwa "njengoba injalo". I-OPS nabahlinzeki bayo nabanikezeli bamalayisense ngalokhu bayazikhipha zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, ezivezwa noma ezisikiselwe, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, amawaranti okuthengiseka, ukufaneleka kwenjongo ethile nokungaphuli umthetho. Inkampani yakho noma abahlinzeki bayo nabanikezeli bamalayisense, abenzi noma yisiphi isiqinisekiso sokuthi iWebhusayithi ngeke ibe namaphutha noma ukuthi ukufinyelela kuyo kuzoqhubeka noma kungaphazanyiswa. Uyaqonda ukuthi ulanda kusuka, noma kungenjalo uthole okuqukethwe noma amasevisi ngeWebhusayithi ngokubona kwakho nangenngozi yakho.
Ukulinganiselwa kweMfanelo. Ngeke kwenzeke ukuthi i-OPS, noma abahlinzeki bayo noma abalayisensi, bayoba nesibopho ngokuqondene nanoma yiluphi udaba lwalesi sivumelwano ngaphansi kwanoma iyiphi inkontileka, ukunganaki, icala eliqinile noma enye inkolelo engokomthetho noma ehambisanayo: (i) noma yikuphi ukulimala okukhethekile, okumele kwenzeke noma okulinganayo; (ii) izindleko zokuthengwa kwemikhiqizo noma amasevisi okufaka esikhundleni; (iii) ukuphazamiseka kokusetshenziswa noma ukulahleka noma inkohlakalo yedatha; noma (iv) nganoma yiliphi inani elingaphezu kwezindleko ezikhokhwa nguwe ku-OPS ngaphansi kwalesi sivumelwano phakathi nenkathi yezinyanga eziyishumi nambili (12) ngaphambi kwesizathu sesenzo. I-OPS ngeke ibe nesibopho nganoma yikuphi ukuhluleka noma ukubambezeleka ngenxa yezindaba ezingaphezu kokulawula kwazo okunengqondo. Lokhu okushiwo ngaphambili ngeke kusebenze kumkhawulo owenqatshelwe ngumthetho osebenzayo.
Ukumelela Okujwayelekile kanye newaranti. Umelela futhi uqinisekisa ukuthi (i) ukusetshenziswa kwakho kweWebhu kuzobe kuhambisana ngqo nenqubomgomo yobumfihlo ye-OPS, nalesi Sivumelwano kanye nayo yonke imithetho esebenzayo kanye nemithethonqubo (kufaka ngaphandle kwemingcele noma yimiphi imithetho yendawo noma iziqondiso ezweni lakho, izwe, idolobha , noma enye indawo kahulumeni, ngokuphathelene nokuziphatha kwe-inthanethi nokuqukethwe okwamukelekayo, futhi kufaka yonke imithetho esebenzayo mayelana nokudluliswa kwedatha yezobuchwepheshe ephuma e-United States noma ezweni ohlala kulo) futhi (ii) ukusebenzisa kwakho Iwebhusayithi ngeke kuphule noma ukusebenzisa kabi amalungelo omhlaba wengqondo kwanoma yimuphi umuntu wesithathu.
Ukuhlawulwa. Uyavuma ukubuyisa futhi ubambe i-OPS engenabungozi, osonkontileka bayo, nomnikezeli wayo wamalayisense, nabaqondisi babo, izikhulu, abasebenzi kanye nabasebenzeli kusuka noma kunoma yiziphi izimangalo nezindleko, kufaka phakathi imali yabameli, evela ekusebenziseni kwakho Iwebhusayithi, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe ekwephuleni kwakho lesi Sivumelwano.
Okuxubile. Lesi Sivumelwano sakha sonke isivumelwano phakathi kwe-OPS nawe maqondana nodaba olukhona, futhi singaguqulwa kuphela ngokuchibiyela okubhaliwe okusayinwe yisikhulu esiphezulu esigunyaziwe senkampani yakho, noma ngokuthunyelwa kwenkampani yakho inguqulo ebuyekeziwe. Ngaphandle kwalapho umthetho osebenzayo, uma ukhona, uhlinzeka ngenye indlela, lesi Sivumelwano, noma yikuphi ukufinyelela noma ukusetshenziswa kweWebhusayithi kuzolawulwa yimithetho yezwe laseCalifornia, e-USA, ngaphandle kokuphikisana kwemibandela yomthetho, nendawo efanelekile noma yiziphi izingxabano ezivela noma ezihlobene nanoma yini ezifanayo kuzoba yizinkantolo zombuso nezesifundazwe eziseSan Francisco County, eCalifornia. Ngaphandle kwezimangalo zokunikezwa usizo lokujeziswa noma okulinganayo noma izimangalo eziphathelene namalungelo empahla yengqondo (engalethwa kunoma iyiphi inkantolo efanele ngaphandle kokuthunyelwa kwebhondi), noma iyiphi ingxabano evela ngaphansi kwalesi Sivumelwano ekugcineni izolungiswa ngokuya ngemithetho ebanzi yokulamula I-Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) yabalamuli abathathu abaqokwe ngokulandela leyo Mithetho. Ukubambisana kuzokwenzeka eSan Francisco, eCalifornia, ngolimi lwesiNgisi futhi isinqumo sokulamula singaphoqelelwa kunoma iyiphi inkantolo. Iqembu elikhona kunoma yisiphi isenzo noma ukuqhubeka kokuphoqelela lesi Sivumelwano liyoba nelungelo lezindleko nezindleko zabameli. Uma noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano ibanjwa ingavumelekile noma ingaphoqeleleki, leyo ngxenye izothathwa njengokukhombisa inhloso yangempela yamaqembu, futhi izingxenye ezisele zizohlala zisebenza ngokugcwele. Ukuyekelwa yinoma yiliphi iqembu kwanoma isiphi isikhathi noma umbandela walesi Sivumelwano noma noma yikuphi ukwephulwa kwaso, kunoma isiphi isimo, ngeke kusulwe leso sikhathi noma leso simo noma noma yikuphi ukwephulwa kwaso okulandelayo. Ungabela amalungelo akho ngaphansi kwalesi Sivumelwano kunoma yiliphi iqembu elivumayo, futhi livuma ukuboshwa yimigomo nemibandela yaso; I-OPS inganikeza amalungelo ayo ngaphansi kwalesi Sivumelwano ngaphandle kwemibandela. Lesi Sivumelwano sizobophezeleka futhi sizozuzisa amaqembu, abalandela emva kwabo kanye nokwabiwa okuvunyelwe.